१९६० देखि बेपत्ता रकेट पृथ्वीतर्फ फर्कदै «
कार्तिक ९, २०७७ आईतबार
१९६० देखि बेपत्ता रकेट पृथ्वीतर्फ फर्कदै
वासिङटन-अन्तरिक्षमा फैलिएको फोहोर पृथ्वीका लागि खतरा बनिरहेको छ । अब नासाका वैज्ञानिकले यस्तै अर्को खतरा पत्ता लगाएका छन् । नासाका अनुसार एक सानो चन्द्रमा वा सानो चन्द्रमा पृथ्वीतर्फ बढिरहेको छ । नासाको अनुमान ठीक भयो भने २७,००० माइलको दुरीमा पृथ्वीबाट सुरक्षित रुपमा गुज्रने छ । तर, खतराको कुरा के छ भने पृथ्वीको गुरुत्वकर्षण क्षमताका कारण यो अक्टोबर २०२० देखि २०२१ को नोभेम्बरसम्म अर्थात् करिब १ वर्ष सम्म पृथ्वीको नजिक रहन सक्छ । अन्तरिक्ष वैज्ञानिकका अनुसार यो वास्तवमा १९६० मे प्रक्षेपण गरिएको थियो । जुन लामो समयदेखि बेपत्ता थियो ।
डां. पल चडासका अनुसार यो स्पेस अब्जेक्ट कुनै सामान्य बस्तु होइन । नासाले यसलाई २०२० एसओ नामाकरण गरेको छ । यो कृत्रिम बस्तु करिब १ वर्षदेखि सूर्यको आसपासमा गुज्रिरहेको छ ।
यो ३.०२५ किमी प्रति घन्टाको गतिमा पृथ्वीको नजिकबाट गुज्रने छ । हालैका दिनमा पृथ्वीबाट गुज्रिएको छुद्र ग्रहको तुलनामा यो गति धेरै कम हो । यो करिब १ वर्ष सम्म पृथ्वीको आसपासमा रहन्छ । तर, नोभेम्बरमा सबैभन्दा नजिक रहन्छ ।
यसैगरी २०२१ को फेब्रुअरीमा यो करिब सवा दुई लाख किमी पर जानेछ । पहिलो पटक २०२० को १७ सेप्टेम्बरमा यस बारेमा पत्ता लागेको थियो ।
कहिले छोडिएको थियो यो रकेट ?
यो ५० वर्ष पहिले छोडिएको रकेट थियो । यसलाई २० सेप्टेम्बर ९६६ को सर्भेयर–२ मिशन अनुसार छोडिएको थियो । यो अन्तरिक्ष यान चन्द्रमाको बारेमा जानकारी जुटाउनका लागि पठाइएको थियो । यद्यपि अन्तरिक्ष यानमा विष्फोटका कारण मिशन असफल भएको थियो । सोही समयमा रकेट अन्तरिक्षमा भट्किएको थियो । यसको केही हिस्सा चन्द्रमासँग ठोकिएर ध्वस्त भएको थियो ।
यद्यपि नासाका अनुसार उक्त रकेट २०२० एसओमा रहेको सूर्यको किरणको सहयोगबाट अधिक जानकारी संकलन गर्ने कोशिश गरिरहेको थियो । नासाका अनुसार यदि यो रकेट सूर्यका कारण यसको गतिमा असर पर्न सक्छ ।
जियोको प्रेरणाको स्रोत १ हजार भारु लिएर मुम्बई आएका धिरुभाइ अम्बानीःमुकेश अम्बानी
नयाँ दिल्ली-रिलायन्स जियोको प्रेरणको स्रोत १ हजार भारु लिएर मुम्बई आएका उनका पिता धिरुभाई अम्बानी
स्कटल्यान्ड-सबैको राम्रो तलब पाइने जागिर मिलोस भन्ने सपना हुन्छ । यस्तोमा यदि कसैलाई केवल बिस्कुट
२०५० सम्ममा तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा भारतले जापानलाई उछिन्न सक्छ
लन्डन-आगामी ३ दसकसम्मको अवधिमा भारतीय अर्थतन्त्र विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरुको सूचीमा पाँचौबाट तेस्रो स्थानमा उक्लन सक्ने
अमेरिकी फर्मलाई चीनमा ‘रेड कार्पेट’
बेइजिङ र वासिङटनबीच व्यापार तनावका बावजुद चिनियाँ उद्योग मन्त्रालयले आफ्नो बजारमा अमेरिकी कम्पनीहरुलाई सक्रिय रुपमा
चुनाव जस्ले जितेपनि अमेरिकी रोजगारी बजार संकटमा
न्यूयोर्क-अमेरिकी चुनाव आउने मिती २ साताको पनि छैन । तर जसले जितेपनि अमेरिकाको अप्ठेरो समस्या
भारतले ल्यायो विश्वकै ठूलो राहत प्याकेज
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै घोषणा गरेको २० लाख करोड भारुको प्रोत्साहन प्याकेजमा लकडाउनलेे बिगारेको अर्थतन्त्र